रोनाल्डोलाई फिफा बेस्ट प्लेयरको अवार्ड - Sudur Khabar
महाकाली नदीमा आधा दर्जन पुल बन्छन्ः भारतीय राजदूत राय अझै राहत पाएनन् दौड तोलेनीका बाढीपीडितले २५ क्षमताको कारागारमा ४८ जना कैदी ! ममताको उपचारका लागि १० लाख ३५ हजार रुपैयाँ सहयोग राष्ट्रपतिको छोरीको हातमा सुनैको बाला ! हिराजडित औँठी, घाँटीदेखि सिउँदोसम्म गहनैगहना ! रोनाल्डोलाई फिफा बेस्ट प्लेयरको अवार्ड
काठमाडौं, पुस २६ । पोर्चुगलका फुटबल खेलाडी क्रिश्चियानो रोनाल्डोले फिफा उत्कृष्ट खेलाडीको पुरस्कार जितेका छन् ।
यही सफलताको लागि उनलाई गत डिसेम्बरमा बलुन डे ओर अवार्डबाट पनि सम्मान गरिएको थियो । फिफा अवार्ड समारोहमा उत्कृष्ट प्रशिक्षकको अवार्ड भने ईटालीयन प्रशिक्षक क्लाउडियो र्‍यानेरीले जितेका छन् । र्‍यानेरीले अघिल्लो सिजन अप्रत्याशित रुपमा लेष्टर सिटीलाई इंग्लीश प्रिमियर लिग फुटबल जिताएका थिए ।